♪ " Sony Xperia X Compact VS Sony Xperia Z5 Compact " ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
♪ " Sony Xperia X Compact VS Sony Xperia Z5 Compact " ♫
Wednesday, October 05, 2016 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Sony Xperia Z5 Compact နဲ့ Xperia X Compact ဟာ အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်းအားလုံးနီးပါး တူညီနေတာကို တွေ့ရပြီး Z5 Compact က အနည်းငယ် ပိုမိုပါးပါတယ်။ အလေးချိန်မှာက X Compact က 3g လောက် ပိုမိုပေါ့ပါးမှု ရှိပါတယ်။ Display ပိုင်းမှာ အားလုံးတူညီပြီး ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ အကုန်လုံးနီးပါး ဆင်တူနေပေမယ့် ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ Z5 Compact က အနည်းငယ် ပိုသာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Z series ဖြစ်တဲ့ Z5 ကတော့ ရေစိုခံနိုင်တဲ့စွမ်းအား ရှိပြီးသားဆိုတာ သိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်း ၂ ခုလုံးအတွက် သိပ်ကွာခြားမှုမရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ရရှိနိုင်ပြီး လျင်မြန်တိကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ HD ဂိမ်းကြီးတွေကိုတောင် ထည့်သွင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ X Compact ကို လှပတဲ့ အဖြူရောင်၊ အမည်းရောင်နဲ့ အပြာရောင် ၃ မျိုး ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး Z5 Compact ကိုတော့ အဖြူရောင်၊ အမည်းရောင်၊ အဝါရောင်နဲ့ သန္တာကျောက်ရောင်ဆိုပြီး တောက်ပတဲ့အရောင် ၄ မျိုး ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Sony X Compact ရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံဟာ အခြား Xperia ဖုန်းတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ပုံစံနဲ့အတော်လေးကို ဆင်တူပြီး အနည်းငယ် ပိုပြားပါတယ်။ ဘေးဘက်ထောင့်စွန်းတွေမှာ screen ကို အနည်းငယ်ကွေးထားပြီး Xperia Z5 Compact ထက် ပိုကြီးကာ ပိုထူပါတယ်။
Sony Xperia Z5 Compact ဟာလည်း Compact အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲလို့ ကောင်းပါတယ်။ Z5 ထက် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး iPhone 6s ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ အရွယ်အစားအတိုင်းပါပဲ။ နောက်ဘက်မှာ ကိုင်တွယ်လို့ကောင်းတဲ့ Frosted Glass ကို သုံးထားပါတယ်။
X Compact မှာ Hexa-core (4x1.4GHz Cortex-A53 & 2x1.8GHz Cortex- A72) နဲ့ Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 တို့ရဲ့ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် တိကျလျင်မြန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်အနေနဲ့ Adreno 510 ကို သုံးထားပါတယ်။
Octa-core (4x1.5GHz Cortex-A53 & 4x2.0GHz Cortex-A57) processor ကို သုံးထားပြီး Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် processor စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို ပိုမိုမြင့်မားအောင် Adreno 430 Graphic Card က ပံ့ပိုးထားပါတယ်။
4.6-inch ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို IPS LCD capacitive touchscreen နဲ့ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး 720 x 1280 pixels ရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို အကြမ်းခံနိုင်အောင် Scratch-resistant glass, oleophobic coating စတာတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားပါတယ်။
Display အရွယ်အစားနဲ့ အမျိုးအစားက X Compact နဲ့ တူတဲ့အပြင် ကာကွယ်မှုစနစ်တွေကလည်း တူညီနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်ထွက်စွမ်းအားလည်း တူညီပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁ လက်မမှာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ သိပ်သည်းဆပမာဏကတော့ အနည်းငယ်ကွာပါတယ်။
Xperia X Compact မှာ RAM 3GB ပါရှိပြီး Z5 Compact ထက် 1GB ပိုများပါတယ်။ Internal memory နဲ့ ဘက်ထရီစွမ်းအားကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တူညီတဲ့ fingerprint sensor ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာကတော့ ဒီ Xperia X Compact ဟာ Z5 လို ရေစိုဒဏ်ကို မခံနိုင်ပါဘူး။
Xperia Z5 Compact ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကင်မရာပါရှိပြီး တိကျသေချာတဲ့ အဆင့်မြင့် fingerprint sensor ပါရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီစွမ်းအားကလည်း အထူးမြင့်မားပါတယ်။ မြင်ကွင်းတွေ အနည်းငယ်တော့ သေးနေတာကလွဲပြီး HD ဂိမ်းကြီးတွေကိုတောင် ကစားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
👉 ဗဟုသုတ နှင့် စာတိုတွေ ဖတ်ရန် သင့်တော်သော Page ?...
Internet Download Manager 6.26 Build 8 (Just Downl...
Samsung Galaxy Note7ကို ဦးနှောက်ထဲမှာ မေ့ပျောက်...
အနားသတ်မဲ့ ရုပ်ထွက်သုံးထားသည့် Mi MIX ကို Xiaomiေ...
Virus Remove All
Windows & Office Activator (25) မျိုး [For Window ...
Note7အသုံးပြုသူတွေကို Note 8 ထွက်လာတဲ့အခါကျရင် ၅...
“Google Pixels XL”
JetAudio Music Player + EQ Plus v7.3.3 (Cracked )